आफु संक्रमित भएपनि सुतिनसुती संक्रमितको उपचार गर्दै भेरी अस्पतालका नर्सहरु ! अमेरिकी दूतावासद्वारा उच्च सम्मान – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारआफु संक्रमित भएपनि सुतिनसुती संक्रमितको उपचार गर्दै भेरी अस्पतालका नर्सहरु ! अमेरिकी दूतावासद्वारा उच्च सम्मान
आफु संक्रमित भएपनि सुतिनसुती संक्रमितको उपचार गर्दै भेरी अस्पतालका नर्सहरु ! अमेरिकी दूतावासद्वारा उच्च सम्मान
एउटी नर्स बे’होसजस्तै देखिन्छन् । दुईतिरबाट साथीहरूले आड दिइरहेका छन् । पीपीई सेटमा रहेका नर्सहरू थाकेको देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको उक्त तस्वीर बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालका नर्सहरूको हो ।